पार्किङ शुल्क नउठाउन अदालतबाट अन्तिरम आदेश जारी — donnews.com
पार्किङ शुल्क नउठाउन अदालतबाट अन्तिरम आदेश जारी
'होडिङ बोर्ड हटाउने र च्यात्ने मेयर जिसी अव्यवस्थति पार्किङ किन देख्दैनन् ?'
पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पार्किङ शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कानुन व्यवसायी राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र नारायण तिवारीले पोखरा महानगरपालिका, मेयर मानबहादुर जिसी, फेवा सावित्री जे.भि., राजश्व शाखा प्रमुख लगायतलाई प्रतिवादी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो । अव्यवस्थित रुपमा सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनहरुबाट पार्किङ शुल्क भन्दै रकम असुल्न थालेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
तीन करोड १६ लाख ७० हजार रुपैयाँमा फेवा सावित्री जे.भि.का पोखरा–६ बैदामका ठाकुरप्रसाद गुरुङले पार्किङ शुल्क उठाउने सम्झौंता नगरपालिकासँग गरेका थिए । अव्यवस्थित रुपमा सडकमा रोकिएका सवारीसाधनहरुबाट धाकधम्की दिई जबरजस्ती रकम उठाउन थालेपछि जागौं पोखरा अभियान्ताहरुले यसको चरणवद्ध विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । उच्च अदालत पोखरामा परेको रिट निबेदन उपर सोमबार अधिवक्ताहरु राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सन्तोष अधिकारी, बिमलप्रसाद लामिछाने, बेदबहादुर बिष्ट ‘विवि विष्ट’, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज पराजुली, राजुराज अधिकारी र सुरेन्द्र थापामगर लगायतले बहस गरेका थिए ।
जागौं पोखरा अभियानका अभियन्ता दीपक आचार्यले कोरोना महामारीको संकटमा जुधिरहेका जनताहरुलाई थप आर्थिक भार पार्ने गरी अव्यवस्थित रुपमा सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनको रकम असुल्नु गलत भएको बताउनुभयो । अभियन्ता आचार्यले भन्नुभयो–‘पोखरा महानगरपालिकाले राजश्व उठाउने नै हो भने निश्चित ठाउँहरुमा पार्किङ गर्ने सुविधासम्पन्न क्षेत्र बनाउनु प¥र्यो । यसरी अव्यवस्थित गराएर पार्किङ शुल्क उठाउन कदापि पाईदैंन ।’
विहान ८ बजेदेखि साँझ ७ः३० बजेसम्म चोकचोक र घरदैलो अगाडिबाट पार्किङ शुल्कका नाममा रकम उठाउने र नमाने टोले गुन्डाहरुको समेत प्रयोग हुँदै आईरहेको छ । राज्यले व्यवस्थित ढंगले पार्किङ स्थल बनाएर रकम उठाउनु पर्नेमा जसरी हुन्छ आफ्ना मानिसलाई टेण्डर दिने र केही मुनाफा लिएर जनता लुट्ने काममा पोखरा महानगरपालिका वषौंदेखि लागिरहेको छ । यसभन्दा अगाडि पनि गरिएको पार्किङ शुल्क उठाउने काममा सम्झौंता अनुसार कुनै पनि कामहरु भएका छैनन् ।
होडिङ बोर्ड हटाउने र च्यात्ने मेयर जिसी अव्यवस्थति पार्किङ किन देख्दैनन् ?
होडिङ बोर्डले पोखराको सुन्दरतालाई कुरुप बनायो भन्दै हिजो निजी घरको छतमा राखिएका होडिङ बोर्डहरु च्यात्दै हिड्ने पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी अहिले किन मौन छन् ? के पोखराको सुन्दरतालाई अव्यवस्थित सवारी पार्किङले कुरुप र बटुवालाई असजिलो बनाएको छैन र ? के यसको सही व्यवस्थापन नै नगरी धमाधम पैसा असुल्ने नियतले ठेक्कामात्र दिएर महानगरपालिकाको दायित्व पुरा हुन्छ कि व्यवस्थित पनि हुनुपर्छ ? यसको जवाफ कसले दिने ?
के पोखराको सुन्दरतालाई छतमा राखिएका होडिङ बोर्डले मात्र कुरुप बनाईरहेका छन् त ? यसको जवाफ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर जिसीले जनतालाई दिनु पर्छ कि पर्दैन ? दिनदिनै बढ्दै गईरहेका निजी सवारी साधनहरुको बारेमा महानगरपालिकाले अब सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? कसरी पार्किङ व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि अव्यवस्थित गराएर कसरी बढि भन्दा बढि रकम असुल्न पाईन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्र केन्द्रित हुनुले स्मार्ट सिटीको नारा आफैंमा स्खलित भईरहेको छ ।
डिजिटल प्रविधिको बोर्डहरु राख्ने भन्दै पोखराका विभिन्न ठाउँहरुमा निजी घरको छतमा राखिएका होडिङ बोर्डका विज्ञापन च्यात्ने र हटाउने काममा तत्कालिन मेयरका सहयोगी लक्ष्मण तिमिल्सिनासहितको टोली निकै दौडधुप गरिरहन्थ्यो । मेयरका सहयोगी विज्ञापन च्यात्न आफैं जान्थे ।
तर डिजिटल प्रविधिको बोर्ड राख्ने नाममा भएको यो चलखेल र योजना अन्ततः तुहिएको पनि छ । यस भित्रको खेल पर्दाफास पनि भएको छ । रातारात सम्झौंता विपरित राखिएका बोर्डहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले खबरदारी गरेपछि हटाईएका पनि छन् ।
तर महानगरपालिकाको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यले यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका युवाउद्यमीहरुको करोडौंको व्यवसाय भने चौपट बनाएको छ । यसरी आर्थिक प्रलोभनमा परेर सडकमा उत्रिने मेयर साहेब, उनका आसेपासे र नगरपालिकाका कर्मचारीहरु यो अव्यवस्थित पार्किङका नाममा किन बोल्दैनन् ? के यसले पोखराको सुन्दरतालाई बढाएको छ त ?
अव्यवस्थित पार्किङको पराकाष्ठा: पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि बटुवा हिड्ने फुटपाथमा अव्यवस्थिति रुपमा राखिएका सवारी साधनहरु र पार्किङ शुल्क उठाउँदै कर्मचारी । खोई, महानगरपालिकाले व्यवस्थित रुपमा सवारी साधनहरु पार्किङ गर्ने स्थल बनाएको ? कानुन र अधिकार छ भन्दैमा आर्थिक चलखेल र लोभमा कहिलेसम्म जनतालाई सास्ती दिने ? अनि जनताहरु पनि कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने ?
विहान ८ बजेदेखि साँझ ७ः३० बजेसम्म यसरी पोखराका सम्पूर्ण चोक, गल्ली र भित्री बाटोहरुमा पार्किङ शुल्क उठाईने गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा जुन समूह हावी छ, त्यसले कानुनको कमजोरीको फाईदा उठाउँदै यसरी नागरिकहरुलाई सास्ती दिदैं आईरहेको छ । तस्विरः रोजिना अधिकारी/डन न्यूज